महान नारीवादी उद्धरण / महिला द्वारा उद्धरण - व्यक्तिगत विकास क्याफे
महान नारीवादी उद्धरण / महिला द्वारा उद्धरण
पोस्ट व्यवस्थापक | Mar 26, 2017 | उद्धरण, समानता र विविधता, थप |0|
1 महान नारीवादी उद्धरण / महिला द्वारा उद्धरण
1.1 यहाँ महिला र नारीवादी उद्धरणहरु द्वारा केहि राम्रो उद्धरण छन्।
महिलाले केही महान् उद्धरणहरू समानता र मानव अधिकारको मुद्दा सम्बोधन गर्छन्। महिलाको भूमिका र अधिकार जाति, समाज, आय, परम्परा आदि जस्ता धेरै कारकहरूमा निर्भर छन् जुन एक देशमा उदार विचारका साथ अर्को देशमा झिक्न सकिन्छ। यी महान नारीवादी उद्धरण र महिला द्वारा उद्धरणहरु हामी सबैलाई नारीवाद सम्बोधन गर्न प्रेरणा र प्रेरणा प्रदान गर्दछ।
जब विश्व सानो र कम एकरूप हुँदै जान्छ, महिलाको अधिकार / समान अधिकार / मानव अधिकारको आवाज बढ्दै जान्छ। चाहे हामी यी मुद्दाहरुलाई नारीवाद, महिला अधिकार, मानव अधिकार वा समान अधिकारको रुपमा हेर्‍यौं भने छलफल योग्य छ।
राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, सामाजिक अधिकारकर्मीहरू, व्यवसायिक नेताहरू, लेखकहरू, अभिनेताहरू र गायकहरूलाई महिलाहरूले हाम्रा महान उद्धरणहरूको सूचीमा समाहित गर्छन्।
यहाँ महिला र नारीवादी उद्धरणहरु द्वारा केहि राम्रो उद्धरण छन्।
मानव अधिकार महिला अधिकार हुन्, र महिला अधिकारहरू मानव अधिकार हुन्।
यदि तपाईं समानताको पक्षमा उभिनुभयो भने, तपाईं एक नारीवादी हुनुहुन्छ। तपाईंलाई बताउन माफ गर्नुहोस्।
म मेरो आवाज उठाउँछु - त्यसो हो भनेर म चिच्याउन सक्दिन, तर त्यसो भएन कि आवाज बिना ती सुन्न सकिन्छ ... जब हामी आधा पछि पकड गर्छौं हामी सफल हुन सक्दैनौं।
महिलाहरू सबै ठाँउहरूमा निर्णय लिइरहेका छन् ... यो महिला अपवाद हो भनेर हुनु हुँदैन।
रूथ बेजर Ginsburg
नारीवाद तपाईलाई आधिकार दिन यहाँ छैन। यो निर्देशात्मक होईन, यो कुटिल छैन। हामी यहाँ गर्न सबै तपाईलाई छनौट दिनका लागि छन्।
पुरुषहरू बराबर हुन खोज्ने महिलाहरूमा महत्वाकांक्षाको अभाव छ।
फेनिनिज्म त्यस्तो लुगा होइन जुन मैले बिहान राखेको थिएँ र निश्चित समयमा बन्द गर्दछु। यो म हुँ म आँखामार्फत संसारमा हेर्छु जुन लैंगिक अन्यायप्रति एकदम सचेत छ, र म सँधै हुनेछु।
महिला र केटीहरूले जहिले पनि अवरोधहरूको सामना गर्नु परेको छ। तर त्यो हामीलाई कहिल्यै रोकेन। हामीले त्याग गरेका छौं, लडेका छौं, अभियान गरेका छौं, सफल भएका छौं, फेरि ढकढकाइयो, र फेरि सफल भए। न्यायको दौडमा हामी हाम्रो अधिकार जित्ने अनगिन्ती बाधाहरूबाट मुक्त भएका छौं।
यदि तपाईं केहि भन्नु चाहनुहुन्छ भने, एक मानिस सोध्नुहोस्; यदि तपाइँ केहि गर्न चाहानुहुन्छ भने, एक महिलालाई सोध्नुहोस्।
मेरो नारीवाद को बारे मा विचार आत्मनिर्णय हो, र यो धेरै खुला-अन्त छ; प्रत्येक महिलाको आफैं बन्ने अधिकार छ, र उनीले गर्नुपर्ने काम गर्नु पर्छ।
“… .. त्यहाँ आफैलाई नारीवादी कल गरेर केहि गलत छैन। त्यसैले म एक नारीवादी हुँ र हामी सबै एक नारीवादी हुनु पर्छ किनकि नारीवाद समानताको अर्को शब्द हो। ”
म एक नारीवादी छु, जबदेखि मँ सोच्न पर्याप्त उमेरको थिएँ, वास्तवमै। म सँधै त्यस्तो व्यक्ति भएको छु जुन पुरुष र महिला बराबर, पूर्ण विराम हो भनेर सोच्दछन्।
यो मात्र होइन, 'केटीहरू केटाहरूभन्दा राम्रो हुन्छन्, केटाहरू पनि केटीहरू भन्दा राम्रा छन्।' यो मात्र हो, 'सबै जना एक उचित अवसरको योग्य छन्।'
मलाई लाग्छ हाम्रो संस्कृतिमा हरेक महिला नारीवादी हो। तिनीहरूले यसलाई अभिव्यक्त गर्न अस्वीकार गर्न सक्दछन्, तर यदि तपाइँ 40 बर्ष पछि कुनै महिलालाई लिनुहुन्छ र भन्नु हुन्छ 'के यो संसार तपाईं बस्न चाहानुहुन्छ?' उनीहरूले 'होइन' भन्थे।
रेकर्डका लागि, परिभाषा द्वारा नारीवाद, पुरुष र महिलालाई समान अधिकार र अवसरहरू हुनुपर्दछ भन्ने विश्वास हो। यो लि ,्गको राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक समानताको सिद्धान्त हो।
आफ्नो नुनको मूल्यको कुनै पनि पुरुषले एक नारीवादीलाई माया गर्छन्। केवल पुरुषहरू जो आफैंमा स्त्रीसँग डराउँछन् महिलाहरूदेखि डराउँछन्।
मेरो महत्वाकांक्षा जब म चार वर्षको थियो विवाह भएको थियो।
जति बढी मैले नारीवादको बारेमा बोलेको छु, त्यति धेरै मैले महसुस गरे कि महिलाको अधिकारको लागि स fighting्घर्ष पनि प्रायः पुरुष घृणाको पर्यायवाची भएको छ।
केहि इतिहासमा सबैभन्दा प्रभावशाली महिला महानता हासिल गर्न लै gender्गिक असमानतालाई स and्घर्ष र संघर्ष गर्नुपर्‍यो।
पछिल्लोप्रभावकारी नमूना व्यक्तिगत ट्रेनर कभर पत्र
अर्कोहाम्रो जीवन कोचिंग क्विज प्रयास गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् तपाईं कसरी गर्नुहुन्छ
के तपाईं एक जुनूनी प्रेमी हुनुहुन्छ? पत्ता लगाउन यो द्रुत क्विज प्रयास गर्नुहोस्